Hurungudo Inozivisa Chiitiko cha Chivabvu 24 | IPhone nhau
Hurungudo Anoshuma May 24 Chiitiko
Hurungudo yaive imwe yevagadziri vekutanga kuvhura smartwatch inogona kunge iri chinhu chinobatsira, nekuti yakatibvumidza kuyananisa smartphone yedu nayo kuitira kuti tigamuchire ziviso paruoko rwedu tisingatore foni nguva dzese padzinorira. Nekuda kwekukanganisa kwakatemwa neApple, Hurungudo yagara yakaganhurirwa muiyo ecosystem, sezvo isu tisingakwanise kudyidzana nefoni mumativi ese ari maviri, kunze kwekutonga kwemumhanzi, kukwanisa kupindura mameseji, maemail ... kunze kwekunge tave nekuputsika kwejeri pa iPhone yedu.
Kuvhurwa kweApple Watch kwaita kukuvara kwakawanda, zvinhu sezvazviri uye vazhinji ndivo vashandisi vakasiya dombo mumudhirowa kuti vaende kuApple Watch uko kusangana mumativi ese ari maviri. Kunyangwe zvakadaro, kambani iri kuenderera mberi nekumisikidza mamodheru pamusika nemagadzirirwo matsva, makara skrini, mashandiro matsva ... asi ivo vanoramba vachisangana neyakaganhurana yekudyidzana, kunyangwe kuburikidza nevamwe vashandisi veAmerica zvave kutokwanisika kupindura kune sms kana hurungudo yakabatana neIphone.
Kana mwedzi ingangoita masere yapfuura kubva kuvhurwa kwayo yazvino modhi, Pebble Nguva Round, kambani ichangobva kuzivisa kuti mangwana tine musangano mutsva navo, na10 mangwanani nguva dzekuMabvazuva. Parizvino hatizive izvo izvo kambani inoda kutiratidza, modhi nyowani ine mamwe mabasa, mabhanhire ane GPS mashandiro ... kana pamwe kutamira kuLCD skrini, kunyangwe zvaizokanda matombo padenga rayo, nekuti yakagara ichizvirumbidza nezve hupenyu hwebhatiri remidziyo yako kana uchishandisa e-ink MuActualidad iPhone isu tichava tichiziva dzese nhau idzo kambani inotanga mangwana kukuzivisa iwe nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Hurungudo Anoshuma May 24 Chiitiko
Apple inoda kusvika makumi masere emamiriyoni eApple 80s akagadzirwa mukupera kwegore
Spotify inotangisa yega chirongwa chemhuri che € 14,99 / mwedzi, iwo mutengo wakaenzana neApple Music